बसन्त र राजुले सहकार्यको 'सिल्भर जुब्ली' मनाउँदा गणेश र साधनाको रोमान्स ! हेर्नुहोस् भिडियो - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper बसन्त र राजुले सहकार्यको 'सिल्भर जुब्ली' मनाउँदा गणेश र साधनाको रोमान्स ! हेर्नुहोस् भिडियो	बसन्त र राजुले सहकार्यको 'सिल्भर जुब्ली' मनाउँदा गणेश र साधनाको रोमान्स ! हेर्नुहोस् भिडियो - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper बसन्त र राजुले सहकार्यको 'सिल्भर जुब्ली' मनाउँदा गणेश र साधनाको रोमान्स ! हेर्नुहोस् भिडियो
बसन्त र राजुले सहकार्यको ‘सिल्भर जुब्ली’ मनाउँदा गणेश र साधनाको रोमान्स ! हेर्नुहोस् भिडियो
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार
काठमाडौं, २६ फागुन । नेपाली संगीत धरातलमा गीतकार बसन्त वित्यासी थापा र संगीतकार राजु सिंह गरिमामयी नाम हुन् । गीतकार थापा र संगीतका सिंहले थुप्रै गीतमा सहकार्य गरेका छन् । यतिबेला यी दुई अब्बल स्रष्टाहरुले सहयात्राको २५औं वर्षगाँठ मनाएका छन् ।
२५ वर्षअघि रित्तो सडकमा बोलको गीतबाट सांगीतिक सहकार्य गर्दै आएका गीतकार बसन्त र संगीतकार राजुले आफ्नो सहकार्यको रजत जयन्ती मनाउँदै गर्दा मोडल गणेश अग्रवाल र साधना शर्माले सहयात्राको शुरुवात गरेका छन् ।
सहकार्यको २५ औं वसन्त पार गरेको खुशीमा नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।